Lip Sugar Scrub And Balm | CATRICE COSMETICS
နှုတ်ခမ်းသားအတွက် peelingလုပ်ပေးတဲ့ scrubဖြစ်သည်။
လွယ်ကူစွာပျော်ဝင်သောကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားကိုပါ ပေါင်းတင်ပေးပြီး ဖြစ်သည်။
Be prepared: Stick withasoftly melting, transparent exfoliating texture for perfectly primed, smooth and naturally gorgeous lips. Contains sugar peeling particles.
ပြင်ဆင်ပါ : နူးညံ့ပျော်ဝင်တဲ့ ခံစားမှုနဲ့ လွယ်ကူတဲ့ exfoliating texture က အကောင်းဆုံးနဲ့ အချောမွေ့ဆုံး၊ သဘာဝဆန်ဆန်လှပတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖြစ်စေပါတယ်။Peeling အတွက်သကြားမှုန်လေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အလွန်ဈေးကြီးတဲ့ Lip make-up ကို ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ Matt textures ကြိုက်တဲ့သူတွေက နှုတ်ခမ်းတွေကို အမြဲတမ်း ချောမွေ့နေအောင် ကောင်းစွာcareလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးစတင်မှုကတော့ Lip Sugar Scrub and Balm ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်နိုင်လွယ်တဲ့ အထိအတွေ့ က ပုံမှန် lip peeling တွေနဲ့တူပါတယ်။အခြားpeeling နဲ့မတူတဲ့အချက်က peeling လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမည်သည့် နှုတ်ခမ်းအရေခွံလေးအဖတ်လေးတွေမှမကျန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အထိအတွေ့က နှုတ်ခမ်းနဲ့ထိတာက ပျော်ဝင်သွားအောင်ပြုလုပ်ပေးပြီး သေးငယ်တဲ့ အရေခွံအဖတ်လေးတွေ ကျန်ရှိမှု မရှိပဲ အရမ်းကိုပျော့ပျောင်းသွားတာကိုခံစားရစေပါတယ်။ထို့နောက် နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ထပ်မံ ဖူးဖူးလေးဖြစ်နေအောင် Lip Super Serum or Lip oilကို လိမ်းပေးပါ။